လွှတ်တော်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ ဦးကိုကိုကြီး ဦးဆောင်တဲ့ ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင်ကို မိတ်ဆက်
ပို့စ်တင်ချိန် - 2/16/2014 08:08:00 PM
တစ်ချိန်ချိန်မှာ နိုင်ငံရေးအရ အင်အားစုအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုနိုင်မယ့် လွှတ်တော်ဖြစ်လာအောင် ကြိုးပမ်းဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဦးကိုကိုကြီးဦးဆောင်တဲ့ ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ရက်နေ့ မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ လှိုင်မြို့နယ်မှာကျင်းပတဲ့ အဖွဲ့အစည်းမိတ်ဆက်ပွဲမှာ OMI ရဲ့အကြံပေး ဦးကိုကိုကြီးက မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနဲ့ လွှတ်တော်ကို လေ့လာစောင့်ကြည့် သုတေသနပြုဖို့အတွက် ထူထောင်တာဖြစ်တယ်လို့ သတင်းမီဒီယာတွေကို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
Open Myanmar Initiative လို့ခေါ်တဲ့ ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင်ဟာ NGO အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး ၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားများအဖွဲ့ဝင်တစ်ချို့နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီး အစိုးရရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးသုံးစွဲမှုကို စောင့်ကြည့်ပြီး အမျာပြည်သူကို ထုတ်ပြန်တင်ပြသွားမယ်လို့ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ ဦးအေးကျော်က ဆိုပါတယ်။
ပညာရေးနဲ့ သုတေသနလုပ်ငန်းတွေကို အဓိကဦးစားပေး လုပ်ဆောင်သွားမယ့် ဒီအဖွဲ့ဟာ လွှတ်တော်စောင့်ကြည့်ရေး အစီရင်ခံစာ အမှတ် ၁ကိုလည်း ထုတ်ဝေခဲ့သလို အင်တာနက်စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ www.omimyanmar.org ကိုလည်း စတင်လွှင့်တင်လိုက်ပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
Media Junk Food
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက် နောက်ဆုံးထား ပြောင်းရွှေ့ခိုင်းထာ...
(၂၆) ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာ့စွန်အလှပြ ပြိုင်ပွဲသို့ မြန်...
Flight medicine အမြင့်ပျံ ကျန်းမာရေး
လုံခြုံရေးအကြံပေး ဗီဒီယိုသစ်ကြောင့် ဝေဖန်ခံနေရသည့်...
သင့်ချစ်သူ အမျိုးသမီးကို ဒီရောဂါတွေ အမြန်စစ်ဆေးသင်...
အောင်မြင်မှုကို ရွေးချယ်ယူလို့ ရပါသလား
ဧရာဝတီစာပေပွဲတော် ဒုတိယနေ့သို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ...
လွှတ်တော်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ ဦးကိုကိုကြီး ဦးဆောင်တ...
Unity ဂျာနယ် အမှုဆောင် အရာရှိချုပ်နှင့် သတင်းထောက်မ...
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ အသက်သွေးကြော ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဖို...
ပြိုင်ကားအုပ်စုမှ ၀ိုင်းဝန်းရိုက်နှက်သဖြင့် အငှားယ...
သစ်ထုတ်လုပ်မှု ရပ်ဆိုင်းရန် အစီအစဉ်မရှိဟု သစ်တောဒုဝ...
၁၀ တန်းကျောင်းသူကို ချစ်သူများနေ့တွင် တည်းခိုခန်းေ...
နေအိမ်မီးလောင်စဉ် သမီးကို သွားရောက်ကယ်တင်သည့်မိခင်...
ဘာမြူဒါတြိဂံ၏ လျှို့ဝှက်ချက်ကို သိပ္ပံပညာရှင်များေ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် နှင့် ၈၈မျိုးဆက်(ငြိ...
ပြင်ပြင်၊ မပြင်ပြင် ..... ငါ့ထိုင်ခုံ ပြန်ပေး
ဆော်ဒီမင်းသားနဲ့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့ ပါကစ္စတန်နိုင...
တရုတ်ကို ဓါတ်အားမဂ္ဂါဝပ် ၁၂၀၀တင်ပို့မယ့်သံလွင်ရေကာတ...
ဇေယျာသီရိကျေးရွာမှ အသက် ၁၀၈ နှစ်ရှိသက်တော်ရှည် အဘွ...
ထိုင်းနိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲအား ဧပြီလထဲမှာ ပြန်လည် က...
ကိုယ်လုံးတီးအမှန်တရား ပန်းချီကားတွေ စန္ဒာခိုင် ရန်က...
ယူကရိန်းမှာ အစိုးရ ထောက်ခံသူတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူ...
တရုတ်ကို ကမ္ဘာ့ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုရဲ့ သက်ရောက်မှုတေ...
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်မှု ကြီးလေးကြီး ဆွေးနွေးရန် မွန်ြ...
ယာဉ်ပိုင်ရှင်များ၏ တောင်းဆိုမှုကြောင့် ဟိုင်းလပ်နှင...
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရန် အခက်ဆုံး အခန်း ၁၂ ပြင်ရေး NLD န...
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ငွေကြေး ကိစ္စရပ်များနှင့် ရောထွေြး...
ဗင်နီဇွဲလား နိုင်ငံရေးတင်းမာမှု မြင့်မားလာ
အင်္ဂါဂြိုဟ်ခရီးအတွက် တွေ့ရမယ့် အခက်အခဲ
မန္တလေး ကင်ဆာရောဂါကုဌာန တစ်နှစ်လူနာဦးရေ လေးရာခန့်ြ...
မန္တလေး ရွှေနန်းတော်ကျောင်း ပျက်စီးမှု အတိအကျ သိရှိနိ...
စင်ကာပူဆရာဝန်များ ပုသိမ်တွင် အခမဲ့ဆေးကု
ရွှေကူတွင် တရားမဝင် ရွှေတူးဖော်မှု ဖမ်းဆီးခြင်းမရှိဟုဆို
မကြာခဏ ခံစားရလေ့ရှိသော လေပွခြင်း
လူမှုအခြေခံ အဆောက်အအုံ စီမံကိန်း ၃ ခု အတွက် ADB ကေ...
ပျဉ်းမနား ရဲအချုပ်ခန်း ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှု ပစ်ခတ်နှိ...
သန်ခေါင်စာရင်းပါ ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အခွန်ကောက်ခံခြင်...
ခြေစမ်းပွဲကစားပေးရန် ဂျာနူဇတ်ကို ကိုဆိုဗိုအသင်း ဖိ...
အူမကြီးကင်ဆာ ရောဂါကို ကာကွယ် နိုင်သည့် နည်းလမ်းငါး...
ခုံးကျော်တံတားများ တည်ဆောက်ထားသော်လည်း ရန်ကုန်မြို...
ပျဉ်းမနား ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်း (အချုပ်)မှ အချုပ်သား တစ်ဥ...
၁၂၀၀ မဂ္ဂါဝပ်ထွက်မည့် သံလွင်မြစ်ပေါ်ရှိ နောင်ဖ လျှပ်...
အင်ဒိုနီးရှားရောက် ၀န်ကြီးကယ်ရီ ဥတုရာသီအရေး ဦးစားပေး
စာပေဟောပြောပွဲကနေ ၈၈ ကိုမြအေး ဖယ်ရှားခံရ
သီလ၀ါစက်မှုဇုန်ကြောင့် ဖယ်ရှားခံရသူတွေကို မစ္စတာ ကင်...
၂၀၁၄ ရွှေမြွေဟောက် စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု
မြိတ်ခရိုင်၊ တနင်္သာရီမြို့နယ်ရှိ ပ၀ကျေးရွာဝန်းကျင်တ...
နေပြည်တော်ကောင်စီ ပျဉ်းမနားမြို့မရဲစခန်း အချုပ်ထော...
ကျွန်တော်မှားဖူးသလို ပြောဆိုပါမည် - မြတ်ဆွေ
သီတဂူဆရာတော်မိန့်ကြားချက် လိုက်နာတဲ့ သဲကုန်းမြို့ရ...
နိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်းစီ တာဝန်ယူကြဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်း...
အရေးအကြီးဆုံး လူ၏ အရည်အသွေးများ
အောင်မြင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် အလုပ်ခွင်မှာ မလုပ...
အာဏာနိုင်ငံရေးနှင့် အထိန်းအကျောင်း နိုင်ငံရေး